एकपक्षीय समाचार प्रशारण भएको भन्दै गाउँपालिकाको रेडियोमा तोडफोड- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
बहाव छेकेर बस्ती
चुरे क्षेत्रबाट भेल लिई आउने तिनाउ नदीलाई २ सय ३७ मिटर फराकिलो बहाव क्षेत्र चाहिन्छ । तर बुटवल क्षेत्रमा मुस्किलले ५० मिटर मात्रै छ । नदी नहर जस्तै साँघुरिएको छ । बहाव क्षेत्र नभएकाले बाढी आउँदा अनेकौं प्रयास गरे पनि बस्ती जोगाउन हम्मेहम्मे पर्छ ।
बुटवल — झन्डै चार वर्षअघि तिनाउमा आएको बाढीले बुटवल–देवीनगर जोड्ने झोलुंगे पुल बगायो । भेलले तिनाउको बहाव छेकेर बसेका काँडाघारीका १४ घर लग्यो । बाँसका सिठा र पत्करमा माटो छापेर ठड्याइएका घर बगे । २१ परिवार विस्थापित भए । वर्षा सकियो । भंगालो घट्दै गयो ।विस्थापित फेरि तिनाउमै फर्किन थाले । उनीहरूले पुनः बहाव छेकेर साविककै ठाउँमा बस्ती बसाले ।
‘हाम्रो अन्त घर छैन । जग्गाजमिन छैन,’ काँडाघारीका राजु नेपालीले भने, ‘सरकारले अन्त आवास दिए मात्रै जान्छौं । नत्र जति पटक घरबास बगाए पनि फर्केर यहीँ आउन बाध्य छौं ।’ उक्त बस्तीबाट बजार नजिक छ । मजदुरी गर्न पाइन्छ । परिवार चलाउन सजिलो छ । यही कारण जोखिम भए पनि तिनाउ तीरमा बसिरहेको उनले बताए ।
सामान्यतया पुलमुनि पानी हुन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको तिनाउ पुलमुनि बस्ती छ । नदीको बहाव क्षेत्र रोकेरै बस्ती बसाउँदा सानो बाढी आयो कि भौतिक र मानवीय क्षति भइहाल्छ । रकम हालेर किन्न नपर्ने र ओगटेका आधारमा घर बनाएर बस्न पाइने भएपछि तिनाउ नदीको तीर खोसिन थालेको हो ।
अहिले तिनाउ नदी बस्ती नै बस्तीले भरिएको छ । उकास क्षेत्र र किनार ढाकिँदै गएपछि पछिल्लो समय बहाव क्षेत्र खुम्चिएको छ । काँडाघारी जस्तै बुद्धनगर, टप मजुवा, सुन्दरनगरलगायत डेढ दर्जन बस्ती तिनाउको बहाव क्षेत्र छेकेर बसेका छन् । बुटवल क्षेत्रका मात्रै करिब चार हजार नागरिक नदीको बहाव खोसेर जोखिमपूर्ण रूपमा बसेका छन् । यस वर्ष मात्रै बुटवल ११ मा करिब २ सय ५० टहरा थपिए । त्यसमा उपमहानगरपालिकाले कुरा उठाएन । बरू पानी, विद्युत्लगायत आधारभूत वस्तु जोडिदियो ।
नदीको तीर हुँदै मानवीय अतिक्रमण नदी बहाव क्षेत्रमै पुगेको छ । यसले नदी साँघुरिँदै गएको छ । यो नहर जस्तै बन्दै छ । विज्ञहरूका अनुसार चुरे क्षेत्रबाट भेल लिएर आउने तिनाउ नदीलाई २ सय ३७ मिटर फराकिलो बहाव क्षेत्र आवश्यक पर्छ । जोखिम क्षेत्रमा हुने वर्षा, बाढीको अवस्थालगायत अध्ययन गरी १५ वर्षअघि विज्ञहरूले बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेका हुन् । तर बुटवल क्षेत्रमा नदीको बहाव क्षेत्र मुस्किलले ५० मिटर मात्रै छ । यसले नदी नहरजस्तै साँघुरिएको छ । बहाव क्षेत्र नै नभएकाले चुरेबाट बाढी आउँदा अनेकौं प्रयास गरे पनि बस्ती जोगाउन सकिएको छैन । ‘नदीको बहाव क्षेत्र जति फराकिलो भयो, उति धेरै सुरक्षा हुन्छ ।
नदी खुम्च्याउँदा जोखिम झन् बढ्छ,’ तिनाउ नदीबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियर खेटराज दाहालले भने, ‘तिनाउ खुम्च्याउँदा खुम्च्याउँदा यस्तो भयो कि भेल उर्लेमा बस्तीमाथि बग्नुको विकल्प छैन ।’
तिनाउ पाल्पाको माडी र कचलबाट सुरु भएको छ । यहाँ आउँदासम्म सानातिना ३० वटा खहरे खोला मिसिन्छन् । बुटवल क्षेत्रमा करिब तीन किलोमिटर बगेपछि मध्यबजार अर्थात् पक्की पुल नजिकैबाट दुई भागमा छुट्टिन्छ । त्यसको पूर्वको खण्ड तिनाउ र पश्चिम खण्ड दानव नदीका रूपमा बग्छ । ६० किलोमिटर घुमेपछि दानव नदी पुनः तिनाउमा मिसिन्छ । तिनाउमा प्रतिसेकेन्ड ४ हजार घनमिटर पानी बग्छ । त्यसमध्येको ४० प्रतिशत दानवमा जान्छ, ६० प्रतिशत साबिक तिनाउमा । नदी अग्लिएको स्थानमा अहिले घना बस्ती छ । सबैभन्दा माथिल्लो बस्ती हो, टप मजुवा । यो बस्ती हेर्ने हो भने तटबन्धको काम छर्लंग हुन्छ । यहाँ रहेका करिब २ सय ५० घर बचाउन मात्रै जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले डेढ करोड लगानी गरेको छ ।
पछिल्ला १० वर्षमा तिनाउ नदी व्यवस्थापनको काम जनताको तटबन्धले गरेको हो । उसले १० वर्षमा यो नदीमा झन्डै ५५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । स्थानीय तहहरूले करिब पाँच करोड खर्चेका छन् । १५ किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की पर्खाल, ठोकर, आरसीसी गेटवार, रिभेन्टमेन्ट आदि लगाएर नदी बहावमा तटबन्ध गरिएको छ । यति धेरै रकम खर्चंदा पनि नदीको उपद्रो शान्त भएको छैन । नदीलाई आफ्नो बहाव क्षेत्रमा नछाडदासम्म तिनाउको उपद्रो शान्त नहुने विज्ञहरूको दाबी छ । बाढीको जोखिम घटाउने हो भने पहिले नदी आसपास र बहाव क्षेत्रमा भएको मानवीय अतिक्रमण हटाउनुपर्ने उनीहरूले बताए । ‘बहाव छेकेर बस्ती बसाल्ने, त्यसपछि बाढी आयो भन्ने यो सुहाउने कुरा होइन,’ नदीबारेका जानकार युवराज कँडेलले भने, ‘नदीको बहाव छेकेर बसेका बस्ती हटाउन नसके तटबन्धमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि दिगो व्यवस्थापन हुँदैन ।’
नियमतः नदीको वास्तविक बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेर मात्रै नदी तटबन्धको काम गर्नुपर्छ । तिनाउ नदीमा भने यो नियम चलेन । बस्ती जोगाउन भन्दै बहाव क्षेत्र अतिक्रमण परेको ठाउँमा पनि बचेकामा मात्रै तटबन्ध गरिएको छ । जनताको तटबन्ध बुटवल कार्यालयको तथ्यांकमा बुटवलदेखि तिलोत्तमासम्म नदीको बहाव क्षेत्रमा करिब चार हजार घरटहरा छन् । जसरी पनि ती घरबस्ती जोगाएर काम गर्ने निर्देशन भएकाले नदी खुम्च्याएर तटबन्ध गरिएको तत्कालीन इन्जिनियर भरत सापकोटाले बताए । ‘टप मझुवा, मझुवालगायत नौ स्थानमा बस्ती सारेर तटबन्ध गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, नीतिगत निर्णय भएन । अधिकांश ठाउँमा नदी किनार ढाकेका बस्ती जोगाउनकै लागि तटबन्धको काम गरेका हौं ।’
बहाव क्षेत्र खोसिएर बुच्चो बनेको नदीले ठाउँठाउँमा तटबन्ध नै भत्काएको छ । दुई वर्षअघि खयरघारीमा तटबन्धको संरचना भत्केपछि आठ किलोमिटर क्षेत्रमा नदी उकास्न काम गरेको थियो । मजुवा बस्ती जोगाउन १३ वर्षअघि चार तपाहा नहरको किनारमा करिब ७० लाख खर्चेर तटबन्ध गरिएको थियो । तटबन्ध तटबन्धमै सीमित छ । मानवीय बस्ती तटबन्ध नाघेर नदी किनारमा पुगेको छ । तिनाउ नदीबारेका अर्का जानकार बटौली संरक्षण समितिका अध्यक्ष रवीन्द्रगोपाल लाकौलले तिनाउमाथि खेलाँची भएको बताए । ‘अहिले तिनाउ मान्छेबाट खोसिएको छ । मनपरी भएको छ,’ उनले भने, ‘एक दिन तिनाउबाट मान्छे खोसिने दिन आउनेछ । १६०० सालतिर अहिलेको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसतर्फको पहाडबाट तिनाउले बस्ती विनाश गरेको थियो रे ।’ तिनाउ थुन्दै जाने हो भने त्यही इतिहास दोहोरिने उनले बताए ।
तिनाउ रूपन्देहीको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको प्रमुख स्रोत हो । पछिल्ला दुई दशकयता अनियन्त्रित उत्खनन र मानवीय अतिक्रमण यति बढ्यो कि नदी नहरमै परिणत भयो । यसले सम्भावना र समृद्धिको मानक मानिएको तिनाउ अभिशापमा बदलिएको छ । यथोचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले दिने आम्दानीभन्दा बढी क्षति हुन थालेको छ । तथ्यांकअनुसार यस वर्ष मात्र बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस नदीबाट ८३ हजार ३ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले २ लाख ५० हजार घनमिटर निकालेको छ । स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ निकालेको दाबी गरे पनि नदीमा त्यस्तो छैन । पैसा कमाउन खोज्ने चुल्ठेमुन्द्रेदेखि राजनीतिक कार्यकर्ता हारालुछ गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्छन् ।
गिटी, बालुवा सकेर माटो आउँदासम्म उत्खनन गर्छन् । यस्तोमा स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासन मौन बस्छ । उत्खननले खाडलै खाडल बनेको तिनाउ बर्खे भेलले पुरिने गरेको छ । तर गहिरिएको नदी माथि उठ्न सकेको छैन । नदी भासिएकै कारण पछिल्ला तीन वर्ष तिनाउ उर्लेको छैन । ‘चुरेको भेल कति बेला बढ्छ, पत्तो हुन्न,’ तिनाउ व्यवस्थापनमा काम गरेका इन्जिनियर सापकोटाले भने, ‘यस्तोमा धार परिवर्तन गरेर बुटवल बजार नै सखाप गर्न बेर लाग्दैन ।’
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने तिनाउमा ०३८ सालमा पक्की पुल बनेको थियो । नदी गहिरिँदा पुलको फाउन्डेसन जमिनभन्दा चार मिटर बाहिर देखिएको छ । विद्युत् प्रवाहका लागि नदी किनारमा गाडिएका विद्युत् पोल जमिनको सतह गहिरिँदा ढल्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा तिनाउ नदीलाई लयमा फर्काउने कसरी ? जुनसुकै बेला हुने विपत्तिबाट बच्न जोखिम क्षेत्रमा बसेको बस्ती के गर्ने ? उपमहानगरपालिकासित सहज उत्तर छैन ।
तिनाउ तीरका जोखिमपूर्ण बस्तीको विकल्प निकाल्न पछिल्लो समय बुटवल उपमहानगरपालिकाले तथ्यांक निकालेको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । त्यसमा १६ हजार १ सय ९३ घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका छन् । यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत घर तिनाउ र दानव नदी अतिक्रमण गरी बनेका छन् । करिब २५ प्रतिशत अति जोखिम क्षेत्रमा छन् । तिनाउ नदीको भेल उर्लेर आयो कि ती घर बगाउँछ ।
यस्ता क्षेत्रका बस्ती अन्त सार्ने कि त्यस्तै रहन दिने ? सुरुमा सबै क्षेत्रको नापजाँच गर्ने र त्यसपछि मात्रै विकल्प निकाल्ने नगरप्रमुख सुवेदीले बताए । ‘यो दुईचार घर वा बस्तीको समस्या होइन । उपमहानगर एक्लैले गर्न सक्ने काम पनि होइन,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा नदीको बहाव क्षेत्र कसरी बचाउने र जोखिमयुक्त बस्ती कसरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने ।
बुटवल उपमहानगरको अभिलेखअनुसार ०१८, ०२७, ०३८, ०५०, ०५९ र ०६५ सालमा तिनाउमा ठूलो बाढी आएको थियो । यसले बुटवल हुँदै जिल्लामा ठूलो क्षति भएको थियो । ०२७ सालमा आएको बाढीले १ सय जनाको मृत्यु भएको थियो । हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको थियो ।
०३८ सालमा आएको बाढीले पाल्पा दोभान र बुटवलमा गरी ६४ जनाको ज्यान गएको थियो । सयौं घर बगाएको थियो । यी बाढी र क्षति आफ्नै आँखाले देखेका बटौली संरक्षण समितिका अध्यक्ष लाकौलले अब पनि अतिक्रमण क्षेत्र हटाएर नदीलाई खुला नछोडे त्यस्तै विपत्ति आउने दाबी गरे । ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘तिनाउ तीरमा बनेका अग्ला घर र मान्छे बाढीसँगै बगाउँदैन भनेर कसरी भन्ने ?’
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १८:५९